Uyifaka njani i-firmware esiyifunayo kwiKobo reader | Zonke iReaders
Uyifaka njani i-firmware esiyifunayo kumfundi wethu weKobo
UJoaquin Garcia | | Kobo, software
Abafundi abaninzi beKobo
Ngakumbi nangakumbi iinguqulelo ze-firmware kunye azizininzi zihlala zisebenza kakuhle ne-eReader yethu. Kwimeko kaKobo, kutshanje bendinengxaki zohlaziyo ezingakhange zisebenze kakuhle kwisifundo sam ngenxa yoko ndiye ndagqiba kwelokuba ndibuyele kwinguqulelo endala ukuyilungisa.
Into leyo, nguKobo Inkqubo yokwenza kube lula kwaye kufanelekile ukuba ukhankanye kwaye uthethe ngayo, indlela engonzakalisi isoftware ye-eReader okanye i-eReader uqobo kwaye akukho seto siyimfuneko.
1 Ndifuna ntoni ukufaka i-firmware endiyifunayo?
2 Ndiyifaka njani i-firmware endiyifunayo?
Ndifuna ntoni ukufaka i-firmware endiyifunayo?
Ukwenza oku kuya kufuneka zip kunye ne-firmware esifuna ukuyifaka. Vula le webhu Uya kufumana uluhlu lwazo zonke iifem zeKobo. Kuya kufuneka wonke umxholo wethu ukhuseleke kuba inkqubo iyakucima yonke idatha esinayo. Siya kufuna kwakhona ikhompyuter yokudlulisa iifayile kumfundi kwaye umfundi unayo ibhetri igcwaliswe ngokupheleleyo. Le yokugqibela ibaluleke kakhulu kuba ngaphandle kwayo i-eReader yethu inokonakala kakhulu.
Ndiyifaka njani i-firmware endiyifunayo?
Nje ukuba kufezekiswe iimfuno ezingasentla, sidibanisa i-eReader yethu nekhompyuter. Nje ukuba uqhagamshelwe, sikhupha ifayile ye-zip kunye ne-firmware kunye noko ikuqulathileyo siyikopa kwifolda .kobo ye-eReader yethu. Nje ukuba sikope, sikhuphe iReader kwikhompyuter yethu kwaye izakuqala ukufaka i-firmware esiyibekileyo. Ngamanye amaxesha isifaki asitsiba kwaye kufuneka siqale kabusha i-eReader ukuze ikwazi ukubona iifayile esizifakileyo.
Nje ukuba kufakwe i-firmware entsha, kufuneka siqiniseke ukuba inkqubo inayo Khubaza uhlaziyo oluzenzekelayo, kuba kwimeko yokuba yenziwe yasebenza, emva kokungqamanisa i-eReader iyakubuyisela inguqulelo yamva nje okanye ingxelo enengxaki.
Njengoko ndikuxelele, le nkqubo kulula ukuyenza kwaye ayinangxaki. Ikwayinkqubo eza kusivumela ukuba sibuyele kuguqulelo apho iKobo eReader yethu isebenza kakuhle kakhulu. Ngaphandle kokonakalisa i-eReader okanye isoftware. Ndicebisa ukuba ngaphambi kokuba uyenze, uyifunde kakuhle le nto kuba impazamo inokuthetha ukuba ekuhambeni kwexesha asinayo i-eReader.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » iinkampani » Kobo » Uyifaka njani i-firmware esiyifunayo kumfundi wethu weKobo
UKobo wayeya kuba ugqibelele ukuba wayenombutho wefolda
IKobo Touch 2.0 iyafumaneka ngoSeptemba 9
I-Ebrolis okanye indlela yokufikelela simahla okanye kwiincwadi ezingabizi kakhulu mihla le